Nike Training Club ichave iripo kune iyo Apple Tarisa | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch nhasi yakasununguka zvakanyanya neiyo iPhone ichienzaniswa neshanduro dzapfuura. Izvi, pamwe chete nekukurumidza processor, zvinogadzira vakawanda uye vazhinji vanogadzira vanofunga nezvekukumikidza huremu kunyorera kuApple Watch. Nike anoshanda weApple mudiwa mukuvandudzwa kweApple Watch uye ino nguva inosimbisa mubatanidzwa wayo.
Wekupedzisira kuzviita yave Nike nechikumbiro chayo chekudzidziswa Nike Kudzidzisa Kirabhu, iyo kusvika zvino yaive pa iPhone kutipa ruzivo panguva yekudzidziswa kwedu uye ichave inosvika zana nemakumi masere ekurovedza.
Nike anotiudza kuti utachiona hwekutanga hwekushandisa hwaiswa nevashandisi, nekuti ivo vaida kuti chishandiso ichi chibude kunodzidzisa neApple wachi chete. Zvinoenderana nekukurukurirana naMike McCabe kuNike, Musoro weDhijitari Chigadzirwa Innovation Chikamu:
Kunyangwe pahunhu hwayo hwese hwakanaka, pane chinhu chimwe chete nezve app iyo vatambi vaida kugadzirisa: dzimwe nguva, ivo havangodi kuti varambe vachienda kunhare pakati pechikamu.
Mhinduro ndeyokuunza iyo Nike Yekudzidzisa Kirabhu app kune iyo Apple Watch: Simba mhinduro kubva vatambi pasi rese vaive ivo vaida kuti isu tiise yakanakisa yekudzidzira app paapuro wachi, uye ndinofunga isu tazviita nenzira inozoita kuti ive yakakosha kukosha uye intuitive yekudzidzira chishandiso.
Zvichida chete chinokanganisa mune yekutanga vhezheni inofanirwa kuvimba neiyo iPhone kutanga kudzidziswa. Ndokureva, iyo watchOS vhezheni ichashanda sekufambira mberi yekutarisisa kwenguva iripo.
Nekudaro, vatambi vanowana simba rekutarisa zvakanyanya pane kurovedza muviri, pasina kuvimba nekutarisa parunhare. Pakati pezvimwe zvinhu, ivo vanogona kutarisa:
El kurova kwemoyo, macalorie akapiswa, pamwe nemamwe maparamende.
El kufambira mberi mukuzadza mheteSezvo iyo Nike application inotumira kunze shanduko kumhete dzeApple.
Tichagamuchira zviziviso nezve kufambira mberi kwedu kwevhiki.
Isu tinoshuvira kuona iyo yekupedzisira vhezheni kuti izive izvi kana mamwe mabasa asina kuunzwa parizvino, kukuzivisa iwe nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nike Training Club ichave iripo kune iyo Apple Watch
Apple Mepu mota dzakatoteedzera mazhinji eUnited States nedzimwe nyika dzekunze
Sketch Art Penzura Dhirowa, chirongwa chekupa ako mafoto kubata kwakasiyana